रेलमा के पठाउने ?
२०७५ बैशाख १ शनिबार ११:३०:००
- रवि मिश्र
टिन्सिनले नि कहिल्यै नछोड्ने भो । एउटो टिन्सिन सकियो अर्को आइलाग्ने, अर्को सकियो अर्को आइलाग्ने । बल्लबल्ल एकथरी टिन्सिनलाई फकाइ-फुल्याई कोसेलीपात प्याक गरी 'लु राम्रोसँग जानू, बा sss इ !' भनेको मात्र के हुन्छ, अर्कोथरी टिन्सिन 'हाss इ !' भन्न आइपुग्छ ।
बिहान भो । सखारै 'ओइ कति सुत्या उठ्नु पर्दैन ? आँगनमा टन्टलापुर घाम लाइसको' भन्दै टिन्सिन उठाउन आइपुग्छ । ब्रस गर्न थाल्यो, मुख धुन थाल्यो— ऐनामा एकथान टिन्सिन जे गऱ्यो, त्यही गर्न थाल्छ । कम्ता रिस उठ्दैन ।
मुख पुछ्नको लागि सँगसँगै टिन्सिन तौलिया खोज्न थाल्छ । हप्ताको एक-दुईदिन यसो प्रभातकालीन बुर्कुसी (मर्निङ वाक) मा निस्किम् न त भन्यो, टिन्सिन अघि-पछि लागेर, अल्झाएर उधुम गर्छ । केही थान टिन्सिनहरु घरघर, गल्लीगल्लीतिरबाट निस्केर 'भौ भौ भौ' गर्छ । चोरलाई झैं दपेट्छ । केही थान टिन्सिनहरु प्वाँप्वाँ पार्दै छेवैबाट हुत्त कुदेर जेमराज सरसँग साक्षात्कार गराएर जान्छन् ।
खाना खान लागो - टिन्सिन पनि धोती फेरेर सँगै बस्छ । कुइनु जुधाएर खाई नसाध्धे पार्छ । 'सौजी एक कप च्या दिनुस् न' भनेर च्या पसलमा पस्यो, टिन्सिन 'मलाई चैं चिनी कम, रंग बढी है' भन्दै आइपुग्छ । कति घाँडो जिनिस यो टिन्सिन भन्ने ।
कार्यालय गयो । सँगसँगै जान्छ टिन्सिन । घर फर्क्यो, सँगसँगै फर्किन्छ । कतै बाहिर निस्क्यो- सँगै निस्किन्छ । यसो जमघट हुन्छ, सबैभन्दा पहिले हात मिलाउन टिन्सिनै आइपुग्छ । जता गयो, उतै टिन्सिन । तोइट !
कहिलेकाहीँ त लाग्छ- यी सारा टिन्सिन यतै छोडेर कतै टाढा जाम् । गइन्छ पनि । तर, जहाँ पुगिन्छ- यो चैं ठाढा भनेर- टिन्सिन आफूभन्दा पहिल्यै त्यहाँ पुगेर आफैंलाई ‘वेलकम' भनिरा' हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ रिसै पनि टुप्पीको टुप्पामा सोइसला खेल्न थाल्छ । अनि 'तँ टिन्सिनेलाई लौ खा !' भनेर टिन्सिनलाई कोठाभित्रै थुनी ताला लाएर बाहिर निस्कियो- 'काली पारी~~ दाइ कति राम्रो …' गीत सुनिन्छ । यसो हेऱ्यो- ढाका टोपी, काँधैमा गलबन्दी लगाउने बज्जे त टिन्सिनै पो हुन्छ त । कहाँबाट उहिल्यै निस्कीवरि ढलक-ढलक गर्दै हिँडिरा'को ।
यसरी मान्छे (अरु नभए मै मात्रै भए नि ) आफ्नै टिन्सिनले थलिएको हुन्छ । आफ्नै टिन्सिन अपरम्पार हुन्छ । यस बखताँ देशको टिन्सिन थपिँदा त सिकिस्त होइँदोर'छ । केही वर्षयता मुलुकको टेन्सनले हनहनी भैरा'छ । पहिले संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने टिन्सिन थियो । सोचिन्थ्यो- यो संविधान भन्ने जिनिस बन्दिए देशको टिन्सिनै सकिन्थ्यो । ढुक्क हुन्थ्यो । लास्टाँ बन्यो पनि । तर, टिन्सिन हटेन । भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । त्यहीँ टिन्सिन भो । यो नाकाबन्दी चैं खुल्दिएदेखि टिन्सिनै खलाँस हुन्थ्यो भन्ने सोचियो । आखिर के छैन र हामीसँग टिन्सिन हुनलाई ? संविधान बन्नुथ्यो, बनिगो । अब संविधान बनेसी समृद्धि आइहाल्छ । समृद्धि आइसकेको समृद्ध देशको मान्छेले टिन्सिन लिनै किन पऱ्यो ? लास्टाँ नाकाबन्दी नि हट्यो । भारतीय नाकाबन्दीको टेन्सन भारतलाई नै जिम्मा लगाएर अब त ढुक्क भो भनेको मात्रै के थियो, अर्को टिन्सिन आइलाग्यो- 'समृद्धि ल्याउने ।'
समृद्धिजस्तो कुरा । ल्याउने त ल्याउने, कसरी ल्याउने ? केमा ल्याउने ? एकबार आउने समृद्धि बसमा के ल्याई भो र ? त्यो भीमकाय समृद्धि बसमा अटाउला पो कसरी ? ट्रकैमा त नअटाउला । अब बस, ट्रकैमा नअटाउने समृद्धि कार, टेक्सी, पिकअप भ्यान जस्ता फुच्चे गाडीमा के आउला ! बाइक, स्कुटरमा ल्याउने भन्नु त केपी ओलिइङ गर्नु हो । बयलगाडामा ल्याम् भने उहिल्यै त्यसैमा चढेर गणतन्त्र आइसक्यो । जाबो एउटो बयलगाडाले गणतन्त्र पनि, समृद्धि पनि के ल्याउला ? ल्याम्दाल्याम्दै बीच बाटोमा फ्याट्ट बयल गाडा पन्चर भयो भने समृद्धि के हिँडाएर ल्याउने ?
धन्न हाम्रा प्रमज्यूले जुक्ति फुराम्नु भो र रेल, पानीजहाज ल्याउने भन्नुभो । रेल, पानीजहाज आउने भएपछि समृद्धि केमा ल्याउने भन्ने टिन्सिन भएन । रेलमा ल्याए नि भो, पानीजहाजमा ल्याए नि भो । फेरि अर्को टिन्सिन शुरु भो- रेल, पानीजहाज पो आउला कि नआउला ? लास्टाँ त्यो टिन्सिन पनि सकियो । प्रधानमन्त्री भारत गएसी रेल, पानीजहाज आउने कन्फर्म भो ।
आउने त कन्फर्म भो, आउनेको त टिन्सिन सकियो । फेरि अर्को टिन्सिन शुरु भो- यस्तो अवस्थामा आउँदा के होला ? बाटोको अवस्था यस्तो छ । खाल्डो नपरेको, पिच नउप्केको ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा रेल कुदाउँदा रेलको टायर कति पन्चर होला ? टायर पन्चर भैहालेमा फेर्ने जनशक्ति, वर्कशप खै नेपालमा ? यस्ता पूर्वाधार तयार नभई रेल ल्याएर फ्याट्ट टायर पन्चर भैहाल्यो भने क्यार्ने ? ठेल्दै भारत लाने बनाउन ? बर्खामा पानी पर्छ । उपत्यका जलमग्न हुन्छ । सडक निर्माण, ढल निर्माण तथा मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन निर्माणको लागि यत्रायत्रा खाल्डा खनेका छन् । त्यत्रा महँगा रेलहरु खाल्डामा डुबी हराए भने देशलाई घाटा परेन ? सडकमा रेलको छुट्टै लेन बनेको छैन । अचेल त ठूला गाडीले साना गाडीलाई, साना गाडीले मोटरसाइकल, साइकललाई पेलेर च्यापेर उल्का गर्छन् । त्यहाँ रेलै पस्दा के होला ? अरु सवारीको राम नाम सत्ते हो भैहाल्यो नि ।
बेलाबखत हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भैरहन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कम्तीमा नि एक महिनालाई पुग्नेगरी तेल भर्न लाइन बसिहाल्छौ । यसैगरी रेल पनि लाइन बस्न थाले भने लाइन कहाँ पुग्ला ? ताप्लेजुङ ? डोल्पा ? दार्चुला ?? फेरि रेल पनि एकथरी होइन, तीन थरी- एउटो त चीनबाट आउने सुल्सुले रेल । अर्को भारतबाट आउने छुकछुके रेल । फेरि अर्को यही विद्यासुन्दरजीको भुलभुले रेल । त्यत्रा लामा-लामा रेल कचौराजत्रो काठमाडौं खाल्डोमा हिँड्दा उहिले नोकिया फुनमा स्नेक गेम खेले जस्तो त हुन्न ? स्मार्ट फुनको यो जगजगीमा हाम्रो समृद्धिले हामीलाई नोकिया जुगमा त लैजान्न ? ट्रक, टिपर गुड्दा त धूलो उडेर आँखा हेर्न हुन्न । त्यत्रो पानीजहाज गुड्न थालेसी धूलो कति उड्ला ? त्यो धूलोले आँखाको हालत के होला ? समृद्धि आए नि देख्न नपाइने भो । समृद्धि नहेरी मरिने पो भैयो । टिन्सिन छ । बोकी नसाध्धे टिन्सिन छ ।
आश एउटो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै थियो- उनले त टिन्सिनबाट मुक्ति हुने जुक्ति निकाल्लान् भन्ने । तर, उनले त झन् अर्को टिन्सिन पो ल्याए । रेल त आउँछ । रेल चडेर समृद्धि नि आउँछ । तर, जाँदा रेलमा के हालेर पठाउने ?
फेरि टिन्सिन छ- रेलमा के हालेर पठाउने ?
एक थैला गुन्द्रुक पठाइदिने त ? कि एक बट्टा तामा ? कि पुरानो अचार ? कि दुईमाना घ्यु ? सिलामको छोप पठाउने त ? कि प्रधानमन्त्री कामरेडकै चुट्किला सङ्ग्रह पठाइदिने ? वा रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री नै रेलमा हालेर पठाइदिने ? भन्नुस् रेलमा के पठाउने ?